Okwu na Ọnọdụ | ThatsLuck.com
Ojiji nke ngwanrọ ebudatara na saịtị ahụ ThatsLuck.com na-egosi nnabata na-enweghị atụ nke ihe ndị a Usoro na ọnọdụ, nke onye ọrụ ahụ kwupụtara na ọ gụọla, ghọta ma kwenye na ya.
1 COPYRIGHT - The SOFTWARE ugbu a ThatsLuck.com Iwu nke ikike nwebisiinka na nke Nwebisiinka ikike dị n'Italytali na-echebe ya, site na nkwekọrịta nke mba ụwa yana iwu ndị ọzọ metụtara.
N'ihi ya, onye ọrụ ahụ ga-emeso sọftụwia ahụ ihe ọ bụla nwere ikike nwebisinka (dịka akwụkwọ ma ọ bụ diski DVD). Onye ọrụ enweghị ike, n'ụzọ ọ bụla, mụta nwa na n'ahịa software na-enweghị tupu e dere ikike nke ThatsLuck.com
2 Ikike ndị ọrụ - ThatsLuck.com nyere onye ọrụ ikike iji sọftụwia ahụ nwa oge maka ojiji nke aka ya.
Aghọtara sọftụwia a ka '' eji ya '' mgbe eji ya na kọmputa, tablet, smartphone ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla ọzọ dabara adaba. Onye ọrụ maara ma nakwere nke ahụ ThatsLuck.com nwere ike igbochi ojiji nke ngwanro na-enweghị ọkwa.
3 OFLỌ AKW USKWỌ AKW OFKWỌ nke SOFTWARE - Onye ọrụ nwere ike ọ gaghị agbanwe ụzọ ọ bụla nke ngwanrọ ahụ.
Ojiji nke ngwanrọ ebudatara apụtaghị ikike iji mmelite ọ bụla ma ọ bụ nsụgharị ndị ọzọ.
4 Mkpochapu ikike maka ihe ojoo - N'agbanyeghi na onye nchịkwa saiti ThatsLuck.com ga-akwụ ụgwọ maka mmebi ọ bụla ma ọ bụ na-enweghị isi (gụnyere, na-enweghị njedebe, mmebi maka ọnwụ ma ọ bụ ọnwụ nke nnata, nkwụsị azụmaahịa, ọnwụ nke ozi ma ọ bụ mmefu akụ na ụba ndị ọzọ) sitere na ojiji ma ọ bụ na-ejighị ngwanrọ ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na nchịkwa saịtị ThatsLuck.com A dụọla ọdụ banyere ohere nke mbibi dị otú ahụ.
Ibu ọrụ ahụ dabere kpam kpam na onye ọrụ. Onye ọrụ ahụ kọọrọ dị ka nke ugbu a iji kwuo ụgwọ maka mmebi ọ bụla, kpọmkwem ma ọ bụ na-enweghị isi nke ụdị ọ bụla na-enweta site na iji ma ọ bụ na-ejighị ngwanrọ ebudatara na weebụsaịtị ThatsLuck.com Maka ihe ọ bụla enyereghị ma ọ bụ kọọ ebe a, e zoro aka na Usoro Ọchịchị Italiantali.